Ejikọtara ịda mbà n'obi na ime ihe ike n'ụlọ, ihe ọmụmụ chọpụtara, mana nke na-abịa mbụ? - Ụwa 2022
Ejikọtara ịda mbà n'obi na ime ihe ike n'ụlọ, ihe ọmụmụ chọpụtara, mana nke na-abịa mbụ?
N'ịtụle oke ime ihe ike nke ụlọ, ọ dị mfe iche na ime ihe ike mmekọ nwoke na nwanyị (IPV) bụ isi iyi ịda mbà n'obi na omume igbu onwe nke ụmụ nwanyị. Otú ọ dị, ihe àmà ọhụrụ na-egosi na mmekọrịta dị n'etiti IPV na ịda mbà n'obi bụ nke siri ike karị.
Nnyocha nke Karen Devries sitere na London School of Hygiene & Tropical Medicine mere ya na ndị ọrụ ibe chọpụtara na mgbaàmà nke ịda mbà n'obi, n'etiti ụmụ nwanyị, jikọtara ya na ahụmahụ nke ime ihe ike.
Mmekọrịta dị n'etiti ime ihe ike na ịda mbà n'obi, mgbe ahụ, nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma n'akụkụ abụọ ahụ.
Ebipụtara taa na PLOS Medicine, ọmụmụ Devries abụghị nke mbụ na-achịkọta mmetụta na ahụike uche sitere na ụdị dị iche iche nke ime ihe ike na mmegbu megide ụmụ nwanyị. Otú ọ dị, ihe dị ọhụrụ n'ọrụ ya bụ ihe ọ na-elekwasị anya na ọmụmụ ihe ogologo oge, bụ nke a na-eme n'ime ogologo oge. Nyere nke a, ha na-enwe ike inyocha mmekọrịta oge dị n'etiti ime ihe ike na-akpachi anya na ịda mbà n'obi.
Ndị na-ede akwụkwọ nyochara ihe karịrị 22,000 ndekọ sitere na ọdụ data 20 maka ọmụmụ ihe na-enyocha anụ ahụ na / ma ọ bụ mmekọ nwoke na nwanyị ma ọ bụ ime ihe ike na mgbaàmà nke ịda mbà n'obi, achọpụtara nnukwu ịda mbà n'obi, dysthymia, ịda mbà n'obi dị nro, ma ọ bụ mgbalị igbu onwe. Ọmụmụ iri na isii na ndị 36, 163 so na ya zutere njirisi ha. Ọ bụ ezie na ọmụmụ ihe niile gụnyere ụmụ nwanyị sonyere, anọ gụnyekwara ụmụ nwoke.
Ihe akaebe doro anya nke njikọ dị n'etiti IPV na mgbaàmà ịda mbà n'obi merenụ dị n'etiti ụmụ nwanyị; 12 nke 13 ọmụmụ gosipụtara ntụziaka dị mma nke mkpakọrịta na 11 ruru ihe ndekọ ọnụ ọgụgụ. Ejikọkwara IPV na mgbalị igbu onwe onye merenụ.
Mana arụmụka ọkụkọ-ma ọ bụ akwa akwa a na-atụghị anya ya kụpụtara. N'ime nyocha ha nke ọmụmụ ogologo oge, ndị nyocha ahụ chọtara ihe akaebe nke otu mkpakọrịta n'ụzọ ọzọ - ụmụ nwanyị dara mbà n'obi na-agba ume n'ụzọ ụfọdụ mmegbu n'ụlọ.
Maka ụmụ nwoke, ihe akaebe na-egosi na IPV jikọtara ya na mgbaàmà ịda mbà n'obi merenụ, ma ọ nweghị ihe akaebe doro anya nwere ike ịhụ na-ejikọta IPV na mgbalị igbu onwe ma ọ bụ, maka nke ahụ, na-ejikọta ịda mbà n'obi na IPV merenụ.
Na nyocha ya nke ọrụ Devries, Alfred Tsai tụrụ aro na mgbanwe ọzọ nwere ike ime, nke na-enweghị atụ na ọmụmụ ihe, nwere ike ịbụ akụkụ nke ngwakọta. Akụkọ ihe mere eme nke mmetọ ụmụaka nwere ike ịbụ ihe metụtara ma ịda mbà n'obi nke okenye na mmetọ ndị okenye, n'agbanyeghị mmekọrịta ha na ibe ha. Tsai rụrụ ụka na site n'ịghara iburu n'uche mmekpa ahụ nwata, enwere ike ịkọwa "mmekọrịta dị ọcha" n'etiti ịda mbà n'obi na IPV dị ka ụzọ abụọ.
Dị ka Òtù Ahụ Ike Ụwa si kwuo, n'ime nnyocha e mere ndị mmadụ asatọ sitere gburugburu ụwa, pasent 10 ruo 69 nke ndị inyom kọrọ na otu nwoke ibe ha na-akpachi anya wakporo ha n'oge ụfọdụ ná ndụ ha. Na U.S., pasenti iri abụọ na abụọ nke ụmụnwaanyị n'ime oge ndụ ha na-akọ na onye mmekọ nwoke na nwanyị wakporo ha; na South Africa, ọnụ ọgụgụ ahụ bụ pasent 13. N'ụwa niile, ihe karịrị nde mmadụ 350 nọ n'afọ ndụ niile na-enwe nkụda mmụọ.
Ịda mbà n'obi bụ isi ihe na-akpata nkwarụ n'ụwa nile ma bụrụ isi ihe na-enye aka na ibu ọrịa zuru ụwa ọnụ.
Ọ bụ ezie na Tsai na-akwado ndụmọdụ Devries na ndị ọrụ ibe ya na ime ihe ike megide ụmụ nwanyị nwere ike inwe mmetụta dị njọ na ahụike uche, ọ na-ekwu na ma ime ihe ike na ịda mbà n'obi nwere ike gbanyere mkpọrọgwụ, akụkụ, na mmekọrịta nwoke na nwanyị na-enweghị oke na "ụdị ịda ogbenye na-adịghị akwụsị akwụsị."
Dịka ọmụmaatụ, n'otu nnwale a na-achịkwaghị achịkwa nke emere n'ime ime obodo South Africa, ụmụ nwanyị jikọrọ aka bụ ndị sonyere na ntinye ego nke obere ego nwetara mbelata nke ukwuu na ime ihe ike mmekọ nwoke na nwanyị. Nnyocha nke data macroeconomic gosiri na mgbanwe na-akwado ụmụ nwanyị na ọnọdụ ahịa ọrụ na US mere ka mbelata ime ihe ike n'ụlọ.
Nkwalite n'ikike ịre ahịa ụmụ nwanyị vis-a-vis ndị mmekọ ha na-akpachi anya, ọ bụ ezie na mgbanwe mmadụ na microscale, nwere ike ịbụ akụkụ nke ntinye aka n'ozuzu nke amụma na-elekwasị anya ọnọdụ ndị na-akpụzi ihe ize ndụ ụmụ nwanyị maka ma IPV na ịda mbà n'obi.